एउटा बाथरूम पर्याप्त छ, तपाईंलाई चीनमा दुई बाथरूम किन चाहिन्छ?
घर / ब्लग / एउटा बाथरूम पर्याप्त छ, तपाईंलाई चीनमा दुई बाथरूम किन चाहिन्छ?
2021 / 04 / 12 वर्गीकरणब्लग 1383 0
बाथरूम सजावट एक अनुशासन हो कि
एक पटक अव्यावसायिक डिजाइन को अस्तित्व
दैनिक जीवनको खुशी सूचकांकमा असर पार्दछ।
धेरै अनावश्यक समस्या ल्याउनुहोस्।
धेरै व्यक्तिको परिवारहरूको लागि।
यदि त्यहाँ दुई स्नानगृहहरू छैनन्
यो घटनाको सामना गर्न आवश्यक छ
बिहान उठ्नु अघि र राती सुत्नु अघि
बाथरूम बिहान र बेलुका पीक समस्याहरूको सामना गर्दछ।
र केन्द्रित प्रयोगको प्रक्रियामा,
शौचालय कोठा क्षेत्र बाइपास गर्न लगभग असम्भव छ।
परिवार सिink्क र शौचालय प्रयोगमा ध्यान दिनेछ।
नुहाउने ठाउँ र शौचालयका लागि पनि लाम छ।
हाम्रो जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न
भिजेको र सुक्खा विभाजन को अवधारणा लोकप्रिय भइरहेको छ।
तर यो बाहिर जान्छ
एक आधारको रूपमा शौचालय छुट्याई बिना गीला र सुख्खा बिछोड।
कुनै कुरा छैन!
तपाईं किन त्यसो भन्नुहुन्छ?
घरेलु बाथरूमको सामान्य लेआउट हेरौं!
सामान्यतया, यो यस्तो देखिन्छ ……
वा यस्तो वर्ग बान्की
शौचालय क्षेत्र, नुहाउने क्षेत्र र शौचालय क्षेत्र एकै ठाउँमा समान रूपमा व्यवस्थित छन्, र नुहाउने ठाउँको सिसाको ढोका मात्र साधारण विभाजनको रूपमा काम गर्दछ, जुन ठीक छ यदि तपाईं एक्लै बस्नुहुन्छ भने, तर यो एक पटक दुईदेखि तीन व्यक्ति समायोजित गर्दछ र बिहानको भीडसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, एक व्यक्ति शौचालयमा जान्छ र अर्को चिन्तित पर्खनु पर्छ।
अवश्य पनि, बाथरूमको उपयोगिताको दक्षता सुधार गर्न, मानिसहरूले सिink्कलाई विधिबाट स्वतन्त्र पारेनन्। तर अझै उही कुरा, तपाई राम्रो स्नान गर्न चाहानुहुन्छ, बाहिर "मलाई शौचालयमा जानु पर्छ" भन्ने नारा बाहिर .....
र यो अभ्यास "भिजेको र सुक्खा पृथक्करण" को लागी अनुकूल छैन - नुहाउने पछि बाथरूमको पानी लम्बे समय लिन सकिनछ, शौचालय क्षेत्रलाई भिजाउन; शौचालय ब्याक्टेरियाले बाथरूमको तौंली र कपडा पनि दूषित पार्नेछ।
त्यसोभए यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्दछ? जापानी बाथरूम को उपयोग को बुद्धि को संदर्भ गरौं।
अलग गरिएको बाथरूमको तीन प्रकार
सबैभन्दा पहिले, जापानी बाथरूमहरूले मूलतः "ट्रिपल सेपरेसन" प्रयोग गर्दछ, नुहाउने, धुने र शौचालयको तीन क्षेत्रहरूलाई छुट्टयाएर।
घरको प्रकारको बावजुद, सबै भन्दा एकीकृत र महत्त्वपूर्ण डिजाइन विचारहरू मध्ये एक शौचालय कोठा स्वतन्त्र छ! यसले प्रयोगको समग्र सुविधामा असर गर्दैन, तर यो अन्य क्षेत्रहरुबाट स्वतन्त्र पनि छ।
अवश्य पनि, केही परिवारहरूले लुगा धुने कोठा पनि सामिल गर्दछन्, जसले गर्दा "तीन प्रकारका बिभाजन" "छुट्टिको चार प्रकार" हुन्छन्। एउटै ठाउँमा स्नान, वाशबासिन, लुगा धुने कोठा र शौचालय एकीकृत छन् र एक अर्कालाई असर गर्दैन।
यस्तो सजावटको फाइदा भनेको यो एक सुसंगत रेखा बन्छ, जसले प्रभावकारी रूपमा साना घरेलु ठाउँको सीमितताहरू समाधान गर्दछ र परिवारको अधिक विविध उपयोगको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
जापानी स्वतन्त्र शौचालय कोठा व्यवस्था, शरीर स्वतन्त्र रूप मा घुमाउन को लागी एक सानो स्पेस मात्र होइन, तर कागज तौलिया र्याक, तौलिए, दर्पण, र सिंक पनि समायोजित गर्न, एक शौचालय एक स्टप सेवा गठन।
विभाजनहरूको स्थापनामा कागज तौलिया र्याकको डबल रोलहरू, सेलफोन वा अन्य साना वस्तुहरूको प्लेसमेन्टको लागि अनुकूल, "मानवीय" केयरको विवरण प्रतिबिम्बित गर्दछ।
ठाउँ बर्बाद नगर्ने सिद्धान्त अनुरूप, शौचालय पछाडि भण्डारण विभाजनले आवश्यक भण्डारण समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ।
शौचालय फ्लश गर्न पुनर्चक्रित पानीको प्रयोगले सानो क्षेत्रलाई मात्र समेट्छ, तर वातावरण मैत्री र ऊर्जा बचत डिजाइन दृष्टिकोण पनि हो।
त्यसोभए, जापानी डिजाइनरहरू कुन कुराले चकित भए: किन हामीलाई चीनमा दुई बाथरूम चाहिन्छ?
त्यहाँ बाथरूमको प्रबन्ध गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर प्रत्येक नयाँ विचार मानिसहरुको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले छ। जबसम्म तपाई कठोर सोचलाई भंग गर्नुहुन्छ, जीवनको उचित डिजाइनको बानीका अनुसार यो प्रयोग गर्न अझ सहज हुन्छ।
अघिल्लो :: घरको बाथरूम, भित्ता शौचालयमा छनौट गर्नुहोस्? वा फ्लोर ड्रेनेज शौचालय? अर्को: किन अन्य व्यक्तिको बाथरूम सधैं राम्रो देखिन्छन्?
2021 / 05 / 28 1501
2021 / 04 / 22 2491
2021 / 04 / 22 1937
2021 / 04 / 21 1692
2021 / 04 / 12 1519